I-Local vs National vs International Search Optimization
NgoMgqibelo, Septhemba 24, 2011 NgoLwesithathu, Okthoba 26, 2011 Douglas Karr
Amanye amaklayenti ethu ahlehlela emuva lapho sisho nokwenza kahle kwasendaweni. Njengoba baziwa njengenkampani kazwelonke noma yamazwe omhlaba, bakholelwa ukuthi ukwenziwa kosesho lwendawo kuzolimaza ibhizinisi labo kunokusiza. Akunjalo neze. Eqinisweni, umsebenzi wethu udale imiphumela ephikisanayo. Ukuwina imiphumela yosesho lwasendaweni kungathuthukisa amathuba akho okuba sezingeni kuzwelonke noma emhlabeni jikelele.
DK New Media isebenza namakhasimende emhlabeni jikelele. Sinamakhasimende eNew Zealand, e-UK naseFrance. Kodwa-ke, futhi sinenani elikhulu lamakhasimende khona lapha e-Indianapolis. Futhi sinenethiwekhi enkulu yabangane lapha e-Indianapolis. Umphumela uba ukuthi kuhlala kuxoxwa ku-inthanethi ngalokho esikwenzayo - ngakho-ke sithola ukunakwa okuningi negunya eliningi ngezinjini zokusesha ngokwemigomo yendawo.
Asilungiselelwe kuphela amagama afana nalawa Indianapolis, sixhasa imicimbi yesifunda, ikheli lethu sinalo onyaweni lwawo wonke amakhasi, futhi sinephrofayili yebhizinisi eqinile kuGoogle… konke okuyisizinda sendawo yethu. Lokho akusivimbanga ekulawuleni imiphumela yosesho lukazwelonke nakwamanye amazwe, noma kunjalo!
Iqiniso ukuthi ukuwina ukusesha kwasendaweni kwakha igunya lesizinda sethu futhi kwaholela ekubeni sikhule ngamagama osesho angahambelani nendawo. Sisendleleni yokuwina inqwaba yemiphumela yokusesha yemigomo yokuncintisana ehlobene ne-SEO, ehlobene nomphakathi kanye ne-ejensi… ukwenza kwethu kwasendaweni akusilimazanga nakancane.
Esikhundleni sokuziba ukuseshwa kwasendaweni, ngithanda ukuhlasela Okuningi Izifunda ezindawo - njengeChicago, iLouisville, iColumbus, iCleveland neDetroit! Uma sithatha abasebenzi bakude, nakanjani sizosebenzela ekwenzeni amahhovisi abo awine ukusesha kwendawo. Kumaklayenti ethu anamahhovisi ezifunda, sisebenze nawo ukuhambisa izingxenyana ezingezansi nezizinda eziqondiswe esifundeni ngasinye. Uma benobukhona obuhle besifunda, kuzosiza isikhundla sabo sendawo.
Futhi uma bekala endaweni yangakini… imigomo ebanzi yokuheha ibhizinisi likazwelonke noma lamazwe omhlaba ilungile!
Sep 28, 2011 ku-9: 38 AM
Ukulungiselela usesho lwendawo ngokuqinisekile akusho ukuthi ngeke ukwazi ukuncintisana ezingeni likazwelonke noma lamazwe omhlaba. Kuyamangaza ukuthi mangaki amabhizinisi anqikaza ngisho nokugcwalisa iphrofayili yasendaweni, ecabanga ukuthi lokho kusho ukuthi azoqhutshwa amajuba. Kungenzeka, futhi kunconyiwe, ukwandisa amakhasi athile osesho lwasekhaya nolwezwe ukuze uhehe zombili izethameli.